Inona ny atao hoe Super Resolution an'ny Adobe Camera RAW | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials
El Ny fe-potoana famahana Super dia efa misy toerana amin'ity famolavolana ity noho ny Adobe rehefa manomboka, ity haitao mandroso miorina amin'ny sary an-tapitrisany ity dia tsy manao na inona na inona ary mamela sary iray avy amin'ny 10MP ka hatramin'ny 40MP iray nefa tsy very antsipirihany na maranitra.
Toy ny hoe majika io Ny zava-baovao nataon'i Adobe dia avy amin'ny Adobe Camera Raw ao amin'ny Photoshop ary tsy ho ela dia ho tonga amin'ny rindranasa hafa toy ny Lightroom sy Lightroom Classic. Hanazava etsy ambony kely isika hoe inona ilay Adobe Super Resolution.
1 Inona ny atao hoe Adobe Super Resolution
2 Ny fanontaniana izao: mila pikantsary bebe kokoa ve isika?
3 Ahoana ny fiasan'ny Super Resolution
4 Fomba fampiasana Super Resolution
Inona ny atao hoe Adobe Super Resolution
Eric Chan no miandraikitra ny tetikasa Super Resolution notanterahina ary efa ananantsika ao amin'ny Photoshop amin'ny alàlan'ny Camera Raw. Izahay dia mitanisa ny talen'ny tetik'asa amin'ity zava-baovao ity izay niasa tao amin'ny Photoshop teo aloha izay nanatanteraka fisehoan-javatra vaovao toy ny: Shadows and Highlights, Clarity, Camera profiles na fanitsiana Lens miaraka amin'ireo tetikasa hafa. Tsikaritra ny asany ao amin'ny Photoshop ary tamin'ity indray mitoraka ity dia gaga antsika izy amin'ity zava-baovao ity.
Tetikasa piksela ihany koa ny Super resolution, toa ny nambarany ihany, fa amin'ny karazany hafa. Manazava tsara azy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny ohatra iray amin'ny sary taloha izay ananantsika 10MP nakan'ny fakan-tsary ambany fanapahan-kevitra ho an'ny pirinty lehibe. Ary izao dia alao sary an-tsaina hoe manana "zoom digital" mandroso ianao mba hanitarana ny lohahevitr'izany sary izany.
Ary io novelty io dia avy fampiasa iray izay navoaka 2 taona lasa: Enhanced Details, ary mampiasa Machine Learning izy io mba hampifangaro ireo rakitra manta miaraka amina fahatokisana, ka miteraka antsipiriany maranitra miaraka amin'ny artifact vitsivitsy.
Izany no izy Ny vahaolana tena izy dia dingana faharoa amin'io tetikasa io ary izany dia manondro ny fizotran'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary amin'ny alàlan'ny fanatsarana na fanatsarana ny vahaolana hita maso.
Fantatrao izao fa ny fanitarana sary dia mahazo antsipiriany manjavozavo hamboarina, saingy ny Super Resolution dia afaka manalefaka azy ireo amin'ny modely fianarana milina mandroso na Machine Learning nofanina sary an-tapitrisany. Ka ny Super Resolution dia afaka manitatra ny sary am-pahendrena nefa mitazona ny sisiny ho madio sy mitahiry ireo antsipiriany tena lehibe.
Ny fanontaniana izao: mila pikantsary bebe kokoa ve isika?
Mazava fa isaky ny manana fakantsary tsara kokoa isika ary inona Raha vao nahavita namokatra sary 6MP ny iray dia toa tsy ampy intsony. Fa ireo 12MP kosa dia lasa "6MP" taloha, ary ankehitriny ny 24 dia ilay teo aloha 12. Ary tsy lazaina intsony ireo fakan-tsary izay manomboka amin'ny 40 ka hatramin'ny 100MP amin'ny sary iray.
Ny valiny, araka ny voalazan'i Chan, hoe raha tena mila pikantsary bebe kokoa isika, dia tsotra: indraindray mazava ho azy eny. Raha raisintsika amin'ny sehatry ny fakana sary avy amin'ny fitaovana finday io dia efa mahita fizarana afaka maka sary 12MP isika. Raha ny lojika, amin'ny sary sasany, mety hanjary ny fampiasana ny Super Resolution an'ny Adobe amin'ny saika tena ilaina. Ny fanitarana sary amin'ny zezika nomerika mba hanomezana azy io mikasika maranitra dia ohatra iray amin'izany.
Like sitrana ny sary tamin'ny taona lasa izay nalainay tamin'ny fakan-tsary ambany kalitao, mamerina antsika amin'ny fomba mahasoa ity fampiasa vaovao nampidirina Chan miaraka amin'i Adobe ity.
Nofaritan'i Chan tamin'ny farany ny fomba nijanon'ity sary namboarinay ity izay nivoatra tao amin'ny 2.5MP ary te hanonta, miaraka amin'ny Super Resolution dia afaka mamadika azy io ho 10MP izy haka azy hanonta ary hamela azy ho vonona. Betsaka ny ohatra ao an-tsainay momba ity fiasa Super Resolution ity izay azonao ampiasaina raha manana Creative Cloud ianao ary manavao ny Adobe Photoshop miaraka amin'ny Camera Raw.
Ahoana ny fiasan'ny Super Resolution
Michaël Gharbi sy Richard Zhang avy amin'ny Adobe Research no nitantana ny fampandrosoana ny votoatin'ny Super Resolution. Ny hevitra dia avy amin'ny fampiofanana solosaina misy sary tsiroaroa sy vahaolana avo lenta an-tapitrisany, mba hahafahan'ny solosaina mahatakatra ny fomba fanandratana tsara ny sary misy vahaolana ambany amin'ny antsipiriany.
Ohatra iray amin'izany:
Ampianaro ny solosaina hianatra amin'ny sary marobe, hoy i Chan, toy ny fampianarana zaza izany: asehonao azy ny firafitry ny fanamelohana ary manome sary an-tapitrisany ho ohatra ianao. Ao amin'ny Super Resolution ity rafitra fototra ity dia nantsoina hoe "Tambajotran-tsivana ambanin'ny lalàm-panorenana", ary izany no fomba mahafinaritra milaza fa izay hitranga amin'ny pixel dia miankina amin'ny iray eo akaikiny. Ity fiofanana ity dia mety maharitra andro na herinandro maromaro.
Fomba fampiasana Super Resolution
Andao tonga eo amin'ilay hevitra:
Tsindrio havanana amin'ny sary na tazomina maharitra Fanalahidy fanaraha-maso raha tsindrio
Safidio ny Enhance ... avy amin'ny menio manodidina
Ao amin'ny Hatsarao ny varavarankely preview, jereo ny boaty Super Resolution
Tsindrio izao amin'ny fanatsarana
Miandrasa kely mandritra ny fanaovana ny kajy ary fisie vaovao no hamboarina ao amin'ny Digital Negative izay misy ny sary nohatsaraina
Azonao atao izao ny manitsy an'io sary io toy ny hafa
Marina izany Ny fihoaram-pefy dia misy fetrany satria ny sary dia voafetra ho 65.000 teboka ary MP 500. Raha manandrana mampihatra sary miaraka amin'ireo isa ireo ianao dia hanome lesoka.
Miraikitra a ohatra maromaro momba ny fomba fanatsarana ny fanatsarana ary mahavariana izany:
Izany dia endrika sy fanatsarana izay miasa ihany koa amin'ny JPEGs, PNGs ary TIFFs, noho izany anananao ny fahalalahana rehetra hanatsara ny karazan-tsary rehetra amin'ity Photoshop lehibe ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Inona ny atao hoe Adobe Camera RAW Super Resolution: Avadiho ho 4K ny sary FullHD